Dutchtown တွင် EncoreSTL နှင့် Encore4Youth • DutchtownSTL.org • Dutchtown, စိန့်လူးဝစ္စ၊ MO
Dutchtown တွင် EncoreSTL နှင့် Encore4Youth
အပေါ် Posted ဇူလိုင်လ 12th, 2021
အချစ်ရယ် Dutchtown မှာဒီမှာရှိတဲ့ဖျော်ဖြေရေးအနုပညာရှင်နှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုတစ်ခုစုပေါင်းသည် သောမတ်စ် Dunn သင်ယူရေးစင်တာ။ ၄ င်းတို့အနေဖြင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေရန်နှင့်အသွင်ပြောင်းလဲရန်မစ်ရှင်ပါ ၀ င်သည့်ပြဇာတ်ရုံဖျော်ဖြေရေးနှင့်ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာများကိုထုတ်လုပ်သည်။
ဒီနွေရာသီမှာ EncoreSTL ကသူတို့မိတ်ဆက်ပေးနေတယ် အချစ် ခေါင်းဆောင်မှုအစီအစဉ်၊ အသက် ၁၆ မှ ၂၄ နှစ်အတွင်းရှိလူငယ်များအတွက်ဖျော်ဖြေရေးအနုပညာ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အခြားသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနယ်ပယ်များတွင်အတွေ့အကြုံရရန်လစာကောင်းသည့်အခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။ $ 16 ထောက်ပံ့ကြေးအပြင် EncoreSTL သည်သင်တန်းသားများကိုသင်တန်းနှင့်လမ်းညွှန်သင်ကြားပေးသည်။ အစီအစဉ်အကြောင်းပိုမိုဖတ်ရှုပြီးအောက်တွင်မည်သို့ပါ ၀ င်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။
စိန့်လူးဝစ္စ၏တောင်ဘက်ခြမ်းကို အခြေခံ၍ ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအနုပညာကိုအတွေ့အကြုံရလိုသူတိုင်းအားလက်လှမ်းမီအောင်ပြုလုပ်ရာတွင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုများကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ယဉ်ကျေးမှုအရသက်ဆိုင်ရာပြဇာတ်ရုံများနှင့်လူငယ်အစီအစဉ်များမှတဆင့် EncoreSTL သည်အသင်းဝင်များ၊ နာယကများနှင့်စိန့်လူးဝစ္စအသိုင်းအဝိုင်းတို့၏ဘဝကိုကြွယ်ဝပြည့်စုံစေရန်ရည်ရွယ်သည်။ EncoreSTL ၏လှုပ်ရှားမှုများသည်အဓိကအားဖြင့်ပြဇာတ်ရုံနှင့်လူငယ်အစီအစဉ်များကိုအဓိကထားပြီး Encore! အသီးသီးပြဇာတ်ရုံ Group နှင့် Encore4Youth ။
EncoreSTL တည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Effrem Grettenberger သည် Encore4Youth အားတီထွင်ဆန်းသစ်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောလူငယ်အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ်တီထွင်ခဲ့သည်။ Grettenberger သည်ကြမ်းတမ်းသောနောက်ခံမှအနုပညာနှင့်ပြဇာတ်ရုံတွင်တည်ငြိမ်မှုနှင့်တည်ဆောက်ပုံကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုအတွေ့အကြုံမှသူသည်စစ်မှန်ပြီးကြွယ်ဝသောလူငယ်အစီအစဉ်များလိုအပ်သည်ကိုသူတွေ့မြင်ခဲ့သည်။
Grettenberger နှင့် Encore4Youth များသည်စာသားအရရောပျော့ပျောင်းသောစွမ်းရည်ဖြင့်ကလေးများကို“ မည်သို့ပြုမူရမည်” ကိုသင်ပေးလိုသည်။ Encore4Youth သည်ကလေးများ၏ကိလေသာများကိုထောက်ပံ့သည်၊ ကျွမ်းကျင်မှုအမျိုးမျိုးကိုသင်ကြားပေးသည်၊ ထို့အပြင်ပေးဆပ်ရန်အပြင်လမ်းညွှန်ပေးသည်။
EncoreSTL အဖွဲ့သည်ပါဝင်သူများအားသူတို့၏အားသာချက်များနှင့်အကျိုးစီးပွားများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အလုပ်လုပ်သည်။ EncoreSTL သည်အဓိကအားဖြင့်ပြဇာတ်ရုံထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်နေစဉ်၊ ၎င်းတို့သည်စိတ် ၀ င်စားစရာကလေးငယ်များအားမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဂီတထုတ်လုပ်ရန်လည်းကူညီနိုင်သည်။ EncoreSTL သည် Encore4Youth ၏ပါ ၀ င်သူများ၏ရူပါရုံများကိုနားလည်ရန်အရင်းအမြစ်များ၊ ကိရိယာများနှင့်လမ်းညွှန်မှုများပေးသည်။
Encore4Youth Leadership သည်ရာသီပေါ် မူတည်၍ အခွင့်အလမ်းများကွဲပြားသည့်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ လူငယ်သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးစင်မြင့်အဖွဲ့၏လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်မည်ဖြစ်ပြီးနွေရာသီတွင်ခေါင်းဆောင်မှုအစီအစဉ်တွင်စွဲငြိဖွယ်ရာဒရာမာကုထုံးလည်းပါဝင်သည်။ မည်သို့ပါ ၀ င်ရမည်ကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကအီးမေးလ်ပို့ပါ info@encorestl.org.
ဒီနွေရာသီမှာ Encore4Youth နဲ့ပူးပေါင်းခဲ့တယ် STL လူငယ်အလုပ်များ အများအပြားပါဝင်သူမှလစာအလုပ်အကိုင်ပေး။ ၀ န်ထမ်းလူငယ်များသည်စင်မြင့်ရှိုးပွဲများနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများကိုပံ့ပိုးပေးသည်။ ယခုနှစ်နွေရာသီနှောင်းပိုင်းတွင်လူငယ်များ ဦး ဆောင်သောနောက်ဆုံးအနုပညာတင်ဆက်မှုတွင်အပြီးသတ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောစွဲငြိဖွယ်ရာဒရာမာကုထုံးအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်သည်။
လာမည့် EncoreSTL အစီအစဉ်များနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲ
Encore! ပြဇာတ်ရုံအဖွဲ့နှင့် Chakq လူမျိုး ခြာရိုကီလမ်းရှိညစာပြဇာတ်ရုံကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။ ခြာရိုကီရှိ ၃၄၀၇ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအင်ပါယာခန်းမ၌လူသတ်မှုဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုအတွက်ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်တွင် Encore ၌ဆက်သွယ်ပါ။ 22-3407-314 ကိုခေါ်ပါ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ လေးအတွက်သင်၏စားပွဲပေါ်မှာနှင့်ညစာကြိုတင်ယူထားရန်။ ကွဲပြားခြားနားသော themes များနှင့်အတူအပိုဆောင်းပြပွဲသြဂုတ်လ5ရက်နှင့်သြဂုတ်လ 19 ရက်နေ့တွင်အရပျ။
စက်တင်ဘာလတွင် Encore! ပြဇာတ်ရုံ Group မှဖျော်ဖြေသည် ညှိုးနှမျး တန်ယာ Saracho ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ညှိုးနှမျး စာရေးဆရာလူစီယာနှင့်အဂျဲန်တာအဗယ်လ်၏ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး Latinx အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူတန်းစားနှင့်လူမျိုးရေးပြissuesနာများကိုချဉ်းကပ်သည်။ EncoreSTL သည်လက်ရှိတွင်အခန်းကဏ္ cast များနှင့်ဒါရိုက်တာတစ် ဦး ကိုရှာဖွေနေသည် ညှိုးနှမျး။ သင်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ဖျော်ဖြေရန်သို့မဟုတ်ပါ ၀ င်ရန်စိတ်ဝင်စားပါကဆက်သွယ်ပါ info@encorestl.org။ ဖျော်ဖြေပွဲများသည်စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်မှ ၁၉ ရက်အထိစက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်မှ ၂၆ ရက်အထိဖြစ်သည်။
EncoreSTL ၏ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်အစီအစဉ်များနှင့်အညီ၊ EncoreSTL ၀ ဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ်သူတို့အပေါ်မှာအောက်ပါ Instagram ကို, Facebook ကဒါမှမဟုတ် တွစ်တာ။ လာမည့်အစီအစဉ်များကိုလည်းဤနေရာတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည် Dutchtown ပြက္ခဒိန်.
အောက်မှာ Filed သောမတ်စ် Dunn သင်ယူရေးစင်တာ. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. ဒိန်းမတ် နှင့် သောမတ်စ် Dunn သင်ယူရေးစင်တာ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဇူလိုင်လ 12th, 2021 .
ဒိန်းမတ် သောမတ်စ် Dunn သင်ယူရေးစင်တာ Dutchtown တွင် EncoreSTL နှင့် Encore4Youth